Ngesikhathi seSoviet, i-crystal ibhekwa njengophawu lokuchuma. Kunzima ukucabanga umndeni lapho izindlu ze-sideboard noma udonga lwama-classic azihlotshwanga nge-crystal vases, izibuko, izitsha. Imikhiqizo eyenziwe nge-crystal yanikelwa etafuleni kuphela ngamaholide amakhulu. Lokhu kubangelwa ukubaluleka okuphezulu kwe-crystal nokubukeka kwayo okuhle. Phakathi neMinyaka Ephakathi, izinkomishi ze-crystal nezitsha kwakuyisakhiwo sobukhosi, manje i-crystal ayizange ilahlekelwe ukufaneleka kwayo. Izitsha ezinhle nezemihlobiso ye-crystal yabo zidinga kakhulu kuze kube yilolu suku, kodwa akulula kakhulu ukunakekela imikhiqizo enjalo. Kuzothatha ukunakekelwa okukhulu kanye nolwazi lwamasu amancane.
Ukuze unikeze izitsha ze-crystal ukukhanya okukhulu, udinga uketshezi indwangu elithambile ngotshwala bese usula izitsha. Uma utshwala luma, ngeke kube khona iphunga, futhi umkhiqizo ngamunye ngeke uthuthuke kakhulu kunamatshe ayigugu.
Hlanza i-crystal ngezigaba eziningana. Okokuqala, sula ngosawoti omkhulu, bese ugeza ngamanzi asozini. Hlanza i-crystal emanzini afudumele nge-add vinegar - iyokwenza ikhanye. Ngaphandle kwalokho, i-blue ingasetshenziswa. Inani elincane leluhlaza okwesibhakabhaka kumele lihlanjululwe emanzini afudumele, uhlanza imikhiqizo ye-crystal futhi yomile ngendwangu elithambile kusuka kuboya noma ku-flannel.
I-Crystal ayibekezeli i-soda, ngakho-ke udinga ukuyihlanza ngezindlela ezikhethekile noma ngamanzi asozini. Uma imikhiqizo ye-crystal igqoka noma iphethini, yibageze ngaphandle kwensipho emanzini afudumele, hlambulula esisombululo se-blukijolo noma uviniga, bese ubhaqa ukukhanya ngendwangu yelineni.
Uma izitsha ezenziwe nge-crystal zingcolile kakhulu, zingasuswa nge-detergent evamile yokushisa okungahlanganisi ama-granules amakhulu bese uwagcoba nge-rag soft. Le ndlela inhle kakhulu ekuhlanzeni amakhekhe ama-Crystal nama-sconces. Uma ufuna ukubanikeza ukukhanya, khona-ke utshwala lungasetshenzwa nge spray.
Kumelwe sikhumbule ukuthi izitsha ze-crystal zithekile ngokwanele, zingaphazamisa noma ziphumele ekushintsheni okushisa okusheshayo. Ngakho-ke, i-crystal ayikwazi ukunciphisa emanzini abandayo kumanzi ashisayo futhi ngokufanayo. Uma ufuna ukubeka okuthile okushisayo kwi-crystalware, khona-ke kufakwa ekhoneni lezinkuni. Ezimeni zensimbi, i-crystal izoqhuma ngendlela efanayo.
Izingilazi ze-Crystal zigcinwa ngokwehlukana, kodwa hhayi komunye nomunye. Uma kungenjalo, bangakwazi ukunamathela ezintweni zomunye nomunye. Lapho uzothola. Uma izinkinga zenzeke, ingilazi engenhla kumele igcwaliswe ngamanzi apholile, futhi ephansi efudumele, lokhu kuzobasiza ukuba banqamule.
Kumele wazi ukuthi izitsha ze-crystal azifanelekile ukuhlanzwa ngemishini, ngakho-ke ngeke ukwazi ukugeza ku-daishisher. Awukwazi ukuyibeka kuhhavini elifanayo noma ku-oven microwave. Eminyakeni edlule, i-crystal ingaba namafu, ikakhulukazi kusukela ekusetshenzisweni okuvamile, ngakho ukunakekelwa kokuvikela nokugubha ngeviniga noma eluhlaza okwesibhakabhaka kumele kwenziwe okungenani kanye ngenyanga.
Naphezu kokuchichima kwemikhiqizo ehlukahlukene eyenziwe nge-crystal ezitolo, ungase uthole inkohliso. Uma ungaqiniseki ukuthi i-crystal inikezwa yini kuwe. Hlola kalula kakhulu. Okokuqala, i-crystal yangempela iyabiza kakhulu kunezingilazi. Okwesibili, lapho imikhiqizo ihlangana ne-crystal, kuzwakala ukukhala okunomsindo, okungafani nokukhala kwe-glassware.
Izitsha ze-Crystal noma imihlobiso yindlela yendabuko yokugcizelela isici salesi sikhathi, esabutha abangane nezihlobo etafuleni elifanayo. Ngeke neze iphume emfashini futhi iyohlale igugu. Imikhiqizo ye-Crystal ivame ukuhlotshiswa nge-build or silver, okwenza ibe mnandi nakakhulu. Ngokunakekelwa okufanele, izitsha nezinto zangaphakathi ezenziwe nge-crystal zingadlulela amashumi eminyaka.
Ukunakekelwa kahle kwezinwele nomzimba
Ungakhetha kanjani ijaji yengane?
Ubuhle boNyaka Omusha
Indlela yokuhlanza kahle amakhowe
Izindlu ezinhle, isithombe
Kuthiwani uma izimpumputhe zikhukhumeza kakhulu?
Ukudla ngezimpelasonto uMargarita Queen, izincomo zezinkanyezi
Iphunga isobho nge-shrimps
Ubulili empilweni yomfazi
Isaladi esisha nge isipinashi
Umbukiso we-cottage shizi kanye ne-avocado
Isobho nebhontshisi neklabishi yaseTuscan
Indlela yokufunda ukuba udle kancane?